REPUBLICADAINIK | एमसीसीमा धेरै प्रोपोगण्डा भयो, संसदमै बुँदा–बुँदामा बहस गरौँ : कांग्रेस नेता थकाली - REPUBLICADAINIK
एमसीसीमा धेरै प्रोपोगण्डा भयो, संसदमै बुँदा–बुँदामा बहस गरौँ : कांग्रेस नेता थकाली
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रोमी गौचन थकालीले उमेरलाई लिएर नयाँ र पुरानो पुस्ता भन्ने तर्कप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कमा अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता थकालीले उमेरले भन्दा पनि विचारले नयाँ र पुरानो पुस्ता छुट्टिनुपर्ने बताए । ‘उमेरले नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता छुट्याउँदैन’, उनले भने, ‘विचारले राजनीति गर्ने हो ।’
नेता थकालीले राजनीतिमा बिकृति रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । ‘राजनीति गरेर रातारात बिल्डिङ बनाएको पनि देखेका छौँ’, उनले भने, ‘गण्डकीमा मन्त्री बनाउँदा विरोध भएको पनि देखेका छौँ ।’
उनले भने, ‘ब्यापारी र डनहरू मन्त्रीमा हाबी नहोस् । प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना र सुझाव छ ।’
‘सरुवा र बढुवामा आर्थिक चलखेल हुन्छभन्दा दुःख लाग्छ’, उनले भने, ‘यस्ता कुरा सुन्दा इमान्दार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई कस्तो हुन्छ होला ?’
झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा पनि कम्युनिस्ट असफल भएपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको नेता थकालीले बताएका छन् ।
‘कम्युनिस्टले संविधानलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर गएकाले त्यसलाई ठाउँमा ल्याउन समय लागेको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ’, उनले भनेका छन् । उनले विरोध गर्नेभन्दा पनि के कति कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो त्यसका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
एमसीसीलाई प्रोपोगण्डा गरेर विरोध भएकोमा नेता थकालीले चिन्ता गर्दै संसदमा एमसीसीका विषयमा गहिरो छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एमसीसीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसदमा दर्ता गर्नुभएको हो । सत्ताभन्दा बाहिर जाँदा विरोध गर्ने, सत्तामा रहँदा समर्थन गर्ने । यो त दोहोरो दुईजिब्रे कुरा भयो ।’
‘एमसीसीमा प्रोपोगाण्डा गरिएको छ । भारतलाई गाली गर्दा हामी राष्ट्रवादी हुन्छौँ भन्ने भ्रम खडा गरिएको छ । चीनको सुरक्षालाई थ्रेट गर्दा सम्बन्ध सुधार हुन्छ ? हुँदैन’, उनले भने, ‘एमसीसी बिथोलियो । संसदमा बुँदा–बुँदामा छलफल हुने थियो ।’
‘एमसीसीबारे म मेरो पार्टीको धारणामा अडिग छु । मेरो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ’, थकालीले भने, ‘मेरो पार्टीले गलत निर्णय गरेको रहेछ भने पनि पार्टीभित्रै बहस गर्छु ।’
उनले भने, ‘एमसीसीले सार्वभौम सत्तामा थ्रेट कसरी छ ? मुस्ताङमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर प्रोपोगण्डा गरिएको छ । हामी कोही पनि भ्रम पर्नु हुँदैन । भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै जानुपर्छ । विकास नचाहने मानिसहरूले एमसीसीको विरोध गरेका छन् ।’
पूर्वमन्त्री थकालीले ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको आयस्रोतको खोजविन गर्नुपर्छ । एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको सूचना स्रोतको बारेमा भन्नुपर्छ । जनताले जान्न पाउनुपर्छ । विकास विरोधी काम गर्नु हुँदैन ।’
नेता थकालीले मुस्ताङ कांग्रेसमा स्थानीय तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनहरू गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले मुस्ताङ कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई बधाइ र शुभकामना समेत दिएका छन् । ‘मुस्ताङमा गुट छैन । हामी सबै कांग्रेस गुट मात्रै छौं’, नेता थकालीले भनेका छन् ।
Published : Tuesday, 2021 September 28, 7:55 am
कांग्रेसको महाधिवेशनलाई मिलेर उत्सापूर्वक सफल बनाऔँ : डा.महत
एमालेको अधिवेशन चलिरहेका बेला सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला नेता नै कांग्रेसमा प्रवेश
आफ्नै घर रहेको नगरमा घनश्याम भुसालको पत्तासाफ, एमालेभित्र पतन शुरु
कांग्रेसका सह–महामन्त्री थापा शोकमा, अकस्मात विराटनगर पुगे
ढल्यो ओलीको अर्को सरकार, हेटौँडामा भव्य खुसीयाली
तरुण दलले यसरी मनायो ६८औँ स्थापना दिवस (तस्बिर)